Posted by Fros on July 15, 2015
ဖုန်းကို တစ်ချိန်လုံး ပလပ်ထိုးထားတာ ဘက်ထရီ ပျက်စီးစေတတ် ပါသလား ? ? ? ဖုန်းကို မည်မျှ ကြာကြာ အားသွင်းသင့် သလဲ ?
General Knowledge Knowledge Phone
Posted by Fros on July 12, 2015
Silicone နဲ့ ပြုလုပ်ထားသော မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများအကြောင်း
Posted by Fros on July 04, 2015
Size ကြီးကြီး ဖိုင်တွေ သီချင်းတွေ ဓာတ်ပုံတွေ အွန်လ...
Mi4i Root, custom recovery, mmfont ကို အသုံးပြုနည်...
Silicone နဲ့ ပြုလုပ်ထားသော မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းမ...